EGWUREGWU NDỊ KACHA EWU EWU NA STEAM NA 2018 - AKỤKỌ - 2019
Ọrụ nkesa dijitalụ maka egwuregwu Steam emeela ka a mara atụmatụ egwuregwu maka ọkara mbụ nke 2018. Na Russia, Rocket League, Counter-Strike Global Offensive, PUBG na GTA 5 so n'ime utu aha ere.
Na mgbakwunye na nchịkọta nke ahịa, steam ochichi akwadebewo ndepụta dị iche iche nke ngwaahịa ọhụrụ kachasị mma, ọrụ VR na egwuregwu nke ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu na-egwu n'otu oge. N'ọnwa June 2018, Jurassic World Evolution, simulator Jurassic World Evolution, ndị na-agba ịnyịnya 2, onye na-agba ọsọ multiplayer na-ekpuchi kpamkpam N'okpuru ezigbo agha na Action / RPG Vampyr enwere mmụba na-ewu ewu n'etiti ihe ọhụrụ kachasị ọhụrụ. Ihe ndekọ VR, Arizona Sunshine, GORN, Onward and Budget Cuts ghọrọ ihe kachasị mkpa, na Ọnụ Aka-Ebu Agha Ụwa, Warframe, Dota 2, GTA V, PUBG kụrụ egwuregwu isii dị iche iche nke ihe karịrị otu narị puku mmadu na-egwu n'otu oge ahụ. na Ogige isii nke isii.
Na mbụ, anyị chetara, ọ bịara mara na Russia na obodo ndị ọzọ nke mbụ USSR bụ nanị pasent 5 nke ahịa na Steam.